Ny tranonkala tsara indrindra misintona boky maimaim-poana | Vaovao momba ny gadget
Ireo tranonkala tsara indrindra hampidinana boky maimaim-poana
Tsy mijanona ny areti-mandringana, saingy tsy afaka mianjera isika. Noho izany dia afaka mampiasa fialamboly marobe isika ary manao an'ity fitanana ity ho zavatra mahasoa, na hamita ireo andian-tantara izay niandrasantsika, ireo lalao video ireo nefa tsy natomboka na mampanan-karena antsika amin'ny boky nomerika mahafinaritra be. Tsy fotoana ratsy mihitsy ho an'ny kolontsaina ary noho izany dia manana safidy malalaka maro isika.
Raha manana a Tablet na smartphone Miaraka amin'ny diagonal efijery lehibe, afaka manararaotra tranokala marobe isan-karazany isika mba hisintomana lohateny maimaimpoana an'arivony. Tombony lehibe izany raha jerena fa sarotra be ny mividy boky ara-batana amin'izao fotoana izaoNa dia ny hividy azy ireo amin'ny magazay an-tserasera aza dia mety misy ny olana amin'ny stock na fizarana. Ho an'ity dia homenay anao ny safidy tsara kokoa hananana azy ireo avy any an-trano ary maimaimpoana tanteraka.
1 Fampiroboroboana fanontana ho an'ny confinement
2 Fomba hafa idirana amin'ny boky maimaim-poana sy ara-dalàna
2.3 Andao hamaky
Fampiroboroboana fanontana ho an'ny confinement
Ny sasany amin'ireo mpitory matanjaka indrindra dia manolotra karazana lohateny malalaka hanehoana firaisankina amin'ny mponina. Fihetsika tsara hampiroboroboana ny kolontsaina amin'ny fotoan-tsarotra toa izao.
Manolotra ity fonosana boky 11 ho an'ity fampiroboroboana ity. Ho fanampin'izany dia hahita a kalandrie izay ahafahantsika manaraka akaiky ireo hetsika famakiana fanampiny misy. Amin'izany fomba izany, mijanona ho mavitrika hatrany izahay hanaraha-maso akaiky ny fivoaran'ny tolotra. HERE afaka miditra isika.
Eto isika mihaona Sanganasa 5 natolotry ny mpanoratra ny loka Herralde, hiditra amin'ny fampidinana anao amin'ny alàlan'ny sehatra izaranay ny bokinao nomerika, toy ny iBooks, Amazon, Google Play ary ny sasany hafa. HERE afaka miditra isika.
More than sanganasa literatiora tanora roapolo Izy ireo dia ampahany amin'ny tolotra malalaka atolotry ny mpitory azy maimaimpoana. Ho an'ireo tanora rehetra te-hiala kely amin'ny YouTube sy Netflix. Tsy mora ny mahita ny rohy fidirana, afaka mahita azy ireo ianao amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny fizarana "loharano hafa" fizarana "loharano", azo jerena ao amin'ny kiheba an'ny lohateny tsirairay. HERE afaka miditra isika.
Manolotra ity mpanonta ity amin'ity tranga ity Lohateny 14 amin'ny karazana literatiora lehibeLohateny tena lehibe ireo ary ho hita amin'ny sehatra fizarana 7 samihafa. HERE afaka miditra isika.
Roapolo no boky mandrafitra ity fifantenana ity natolotra maimaim-poana alaina amin'ny endrika PDF amin'ny tranokala ofisialin'ny mpanonta. Avy amin'ny tantara na lahatsoratra dystopiana hanamorana ny fanjohian-kevitra mitsikera ary na dia ny sasany aza anaram-boninahitry ny ankizy dia ampahany amin'ny sokajy misy amin'ity fampiroboroboana ity. HERE afaka miditra isika.
Fomba hafa idirana amin'ny boky maimaim-poana sy ara-dalàna
Eto izahay dia handeha amin'ny antsipiriany ny sehatra lehibe indrindra amin'ny fizarana sanganasa literatiora, izay ankoatry ny fananana tolotra tsy manam-petra amin'ny fandoavambola, manana katalaogin'ny safidy malalaka izy ireo. Na dia tsy fampiroboroboana aza izany noho ny zava-misy ankehitriny, dia zavatra izay mety ho hitantsika mandritra ny taona.
La magazay par tsara indrindra eo amin'ny sehatry ny literatiora nomerika, izay ahitantsika tolotra tsara Kindle eBooks maimaim-poana. Classics ny literatiora amin'ny fitenintsika, toy ny sanganasan'i Cervantes, Lorca na Miguel Hernandez… Sns. Afaka mahita ihany koa isika asa vazaha nadika amin'ny fiteninay, na dia mahay fiteny maromaro aza ianao dia azonao atao ihany koa ny misintona azy ireo amin'ny fiteny hafa. HERE afaka miditra isika.
Amazon, ankoatry ny fanolorana boky maimaimpoana, dia manome lohateny bebe kokoa aza raha mpanjifa Amazon Prime ianao, ka hanana fihenam-bidy hividianana Kindle Paperwhite izay efa nataonay ny famerenana HERE, hankafizanao ireo boky nomerika rehetra.
Amin'ity tranonkala ity dia afaka mahita mihoatra ny Boky 18.000 amin'ny teny espaniola hahafahantsika mijery azy ireo amin'ny Internet. Manana boky amin'ny fiteny isan-karazany, ho an'ny boky 1,4 tapitrisa. Nakaton'izy ireo ny fizotran'ny fiandrasana indram-bola mandritra ny quarantine. Afaka ataontsika misintona mora foana atiny betsaka, samy ao PDF como el ePUB, ireo lohateny izay mahasarika anao indrindra, io dia iray amin'ireo loharanom-pahalalàna kolontsaina an-tsoratra izay hitanay. HERE afaka miditra isika.
Amin'ity tranga ity dia serivisy fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny famandrihana isam-bolana, na dia afaka miditra a Fitsapana maimaimpoana 30 andro. Afaka mahita isika anaram-boninahitra an-tsoratra mihoatra ny 1000 ary koa audiobooks, zavatra tena ahazoana aina tokoa raha tsy te-hampivadi-po ny masontsika amin'ny alina isika. Ireo dia voaangona eo amin'ireo mpivarotra, kilasika ary zava-baovao. Samy manana ny fangatahana izahay iOS como el Android. Manana isika HERE fidirana amin'ny tranokalanao.
Eto isika dia afaka mahita kilasika an'arivony izay mivezivezy malalaka noho ny sehatra ho an'ny daholobe, manana anaram-boninahitra maro karazana izahay. Voakambana ho sokajy izy ireo. Mizara roa ireo izay an'ny tantara forona na tsia, manana manomboka amin'ny lohateny mampihorohoro ka hatramin'ny fanampiana sy fanabeazana. HERE afaka miditra isika.
Serivisy fandoavam-bola hafa miorina amin'ny famandrihana amin'ny fizarana boky, magazine ary torolàlana momba ny dia. Na izany aza, manana a Fitsapana maimaimpoana 30 andro. Manana fangatahana iOS y Android noho izany dia hanamora kokoa antsika ny fidirana amin'ny fitaovana miaraka amin'ireo rafitra miasa ireo. Hanana fidirana amin'ny takelaka, mpamaky e-book ary solosaina koa izahay. HERE afaka miditra amin'ny tranonkalanao izahay.
Ity indray mandeha ity dia serivisy izay ahitantsika tsena mpanoratra mahaleo tena izay manitsy ny lohateniny manokana. Izy io dia misy fizarana manokana izay atambatra ireo rehetra manana ny safidy fampidinana maimaimpoana amin'ny endrika nomerika. Satria saika mizara sokajy ny ankamaroan'izy ireo, izay ahitantsika izay tantaram-piainana, mahaolona ary tantara, hatramin'ny tononkalo na psikolojia. HERE afaka miditra amin'ny tranonkalanao izahay.
Mamaky, mianatra ary mivoatra no andian-teny nahasarika azy ireo. Mizara telo izy io, «boky natolotra "," boky sy lahatsoratra amin'ny PDF "ary" loharanom-pahalalana hanatsarana ny famakinao ", lohahevitra mahaliana amin'ny fisafidianana boky, manolotra boky sy fitaovana manana fahazoan-dàlana maimaim-poana Creative Commons (fikambanana tsy mitady tombom-barotra natokana hampiroboroboana ny fidirana sy fifanakalozana kolontsaina) izay azo jerena amin'ny Internet. HERE afaka miditra amin'ny tranonkalanao izahay.
Manoro hevitra izahay hampiasa boky elektronika izay tsy mampiasa ny loharano jiro manga noho ny hazavany raha te hamaky alina isika, satria mety hiteraka fihenjanana amin'ny masontsika sy tsy fahitan-tory izany. Raha tsy manana fitaovana toy izany isika afaka misafidy ny hampiasa sivana jiro manga na fomba famakiana isika izay saika mitondra ny fitaovana rehetra izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » eReaders » Ireo tranonkala tsara indrindra hampidinana boky maimaim-poana
iPad (2019): mora vidy indrindra ankehitriny [REVIEW]
Ho fanampin'ny P40, Huawei koa dia nanolotra ny Watch GT 2e, ny mpanampy Celia, Huawei Video ary maro hafa.